Bill Gates wuu yaqaan sida loo sheego kaftanka aadka u wanaagsan ... miyaadan rumaysanayn? | Laga soo bilaabo Linux
Bill Gates wuu yaqaan sida loo sheego kaftanka aadka u wanaagsan… miyaadan rumaysanayn?
DAVOS / SWITZERLAND, 25JAN08 - William H. Gates III, Guddoomiyaha, Microsoft Corporation, USA, ayaa la qabtay intii lagu jiray shirkii jaraa'id ee Kulan Sanadeedkii 2008 ee Madasha Dhaqaalaha Adduunka ee Davos, Switzerland, Janaayo 25, 2008.
Xuquuqda daabacaadda Golaha Dhaqaalaha Adduunka swiss-image.ch/Sawir Andy Mettler
+++ Ha iftiimin, ha xafidin +++
Bilyaneerka iyo ex Microsoft, Bill Gatesmararka qaarkood wuxuu dhahaa waxyaabo xiiso leh. Mid ka mid ah kii ugu dambeeyay wuxuu ahaa xukun ku dhacay Microsoft Windows Mobile kaasoo aan cidna uga tagayn danayn aan u malaynayo inaysan sax ahayn, si kasta oo uu isugu dayo inuu u difaaco shirkadiisa una daboolo fashilka baaxadda leh ee haysta Mobile Mobile. Waxaan si dhab ah u aaminsanahay in Microsoft ay ku guuleysatay dhinacyo badan, laakiin ma ahan kiiska nidaamkiisa hawlgalka ee qalabka mobilada.
Waqti ka hor, Caddaaladda Mareykanka ayaa cambaareysay shirkadda by dhaqanka monopolistic. Kiiska lidka ku ah kalsoonida ayaa runtii saameyn ku yeeshay Microsoft, in kasta oo aanan hubin inuu intaas weynaa, haddii ay sidaas tahay, waxaan u maleynayaa inaysan wax xiriir ah la lahayn wixii uu yiri Bill Gates. Hagaag maxaan waxan oo dhan u leeyahay?
Hagaag, maxaa yeelay Bill Gates wuxuu faallo ka siiyay warbaahinta Ingiriiska The New York Times in «Shaki kuma jiro in dacwadda ladagaalanka hanti-goosadku ay u xumeyd Microsoft oo aan xoogga saari lahayn abuurista nidaamka hawlgalka moobiilka. Halkii aad ka isticmaali laheyd Android, waxaad ku shaqeyn laheyd Windows Mobile hadaanay ahayn 'kiiska ka dhanka ah kalsoonida'. Aad baan u dhawaa. Hadda cidina ma maqlin WIndows Mobile. Laakiin haye, waa dhowr boqol oo bilyan halkan iyo halkaa. (kharashka hawsha) ». Waa hagaag ... ummm, waxaan u maleynayaa, iyadoo la ixtiraamayo dhammaan, tan ma aha sidaas.
Maalqabeenku uma maleynayo inay khaladka barnaamijyadan yihiin, ama sida tikniyoolajiyadda moobiilku u soo baxeen, ama wax la mid ah, laakiin kiiskan maxkamadda. Oo sida uu sheegay, wuxuu u maleynayaa in haddii aysan hadda dhicin nidaamka hawlgalka ee ugu isticmaalka badan uu noqon doono Windows Mobile. Laakiin uma maleynayo in nidaamka Windows NT-ku saleysan uu noqon doono kan ugu fiican ee loogu talagalay barnaamijyada moobiilka oo kari kara la qabsan macruufka iyo Android, Waxaan qabaa shaki culus, runta. Waxaan fursad u helay inaan dib u eegis ku sameeyo taleefanka casriga ah ee loo yaqaan 'Sony Xperia smartphone' oo wata Windows Phone waana waxa ugu xun ee soo maray qaabkiisa iyo astaamo kale… Waxaan ku helay sheyga si xamaasad leh aakhirkiina waan rajaynayay. In kastoo ... haye! Waxyaabo shisheeye ayaa dhacay. Xaqiiqdii way yaqaaniin sida Windows looga dhigo barxada ugu weyn ee desktop-ka. Waxaa laga yaabaa inay heystaan ​​istiraatiijiyad ay ku heli karaan qeybta mobilada sidoo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Android » Bill Gates wuu yaqaan sida loo sheego kaftanka aadka u wanaagsan… miyaadan rumaysanayn?
Brexit waa mid aad u xoogan oo New York Times go'aansaday inuu noqdo marin Ingiriis.
Kaftanka ka baxsan, Windows Mobile waligiis ma qaban, sidoo kale isku daygii Ubuntu ma uusan qaban.
haha ayaan iskula fikiray
Ku jawaab Dark
Waqtiga uu Bill bilaabay inuu noqdo miiska ugu isticmaalka badan, wuxuu rabay inuu guri walba la joogo PC oo wuu ku guuleystay
Jawaab Mario Tello
waxa aan dhawaan ku arkay arintan ayaa ah in dadku ku sii wareeraan Windows Mobile iyo Windows Phone. inaysan isku mid ahayn ama isku mid ahayn.
Windows Mobile wuxuu hormuud u ahaa waxyaabo badan, wuxuuna ahaa nidaam ku diirsaday caan weyn xilligiisii. Waxay lahayd kumanaan barnaamij, wixii ka bilaabmay otomaatiga xafiiska illaa emulators, rom-ka wax lagu kariyo looma abuurin android, wuxuu ka bilaabmay windows windows. Bulshooyinka muuqaalka weyn leh sida XDA maanta waxay kubilaabeen sidii daaqadaha bulshooyinka kudhaqan mobilada (XDA lafteeda waxay kubilaabatay gole loogu tala galay O2 XDA, aalad Mobile Windows ah).
Nidaam isku mid ah ayaa ka horreeyay iOS muddo dhowr sano ah. marka Gates wuu saxan karaa. Maaddaama Mobile-ka la soo saaray sannadihii u dambeeyay ee Microsoft, kii Mobile-ka beddelay, Windows Phone wuxuu ahaa wax soo saar badan xilligii beddelkiisa Ballmer, oo markii dambe la joojiyay beddelkii Ballmer, Nadella.
Ku jawaab Elizabeth Saavedra
Stratis, oo ah xalka maaraynta keydinta deegaanka ee Linux